Saxaafadda Kenya oo kashiftay xog cusub oo ku saabsan KHALAD wayn oo ay gashay Dowladda Kenya (Arrin ay sameeyeen kuwa afduubka gaystey) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Saxaafadda Kenya oo kashiftay xog cusub oo ku saabsan KHALAD wayn oo...
Saxaafadda Kenya oo kashiftay xog cusub oo ku saabsan KHALAD wayn oo ay gashay Dowladda Kenya (Arrin ay sameeyeen kuwa afduubka gaystey)
(Milano) 11 Maajo 2020 – Waxaa shalay soo guryo noqotay Silvia Romano oo 18 bilood kahor laga soo qafaashay dalka Kenya, iyadoo u shaqaynaysey hay’adda samafal ee Africa Milele, 20-kii Nofeembar 2018 iyadoo ku sugnayd tuulo faqri ah oo Chakama ah oo jirta dhanka gobolka Xeebta.
Saxaafadda Kenya ayaa haddaba iminka kashiftay khalad iyo dayacaad ka timid dhanka Dowladda Kenya oo aan sidii la doonayey uga falcelin afduubka, sida uu qoray The Nation.
Khaladaad iyo dib u dhacyo ka yimid Dowladda Kenya ayaa sababay inay kooxdii gabadhan afduubtay ay lasii maraan Ismaamulka Gaarisa kaddibna ay ula gudbaan dhanka Somalia.
Marka 1-aad, Booliiska ka socda Maamulka Booliiska Lango Baya ayaa Chakama soo gaarey 2 saacadood kaddib markii uu afduubku dhacay. Waxaa sidoo kale lasoo kiciyey halakabtar ay millaterigu leeyihiin si ay u caawiso howlihii raadinta, balse waa duhurkii maalintii dambe.
The Nation oo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay in todobaadyadii ku xigey ay Dowladda Kenya ku adkaysanaysey shacabkana u sheegaysey inay Silvia weli ku jirto gudaha Kenya oo ay wax kasta u samayn doonto badbaadadeeda, waloow markiiba lala galay gudaha Somalia. Kaddibna xaaladdu waaba iska degtey.
3 ka mid ah afduubayaasha oo kala ah; Ibrahim Omar, Abdulla Wario, iyo Moses Liwali ayaa haatan la hayaa oo ay dacwo ku socotaa.
Halka 2 kale oo madaxooda la saaray Sh1 milyan oo shilin kalana ah Mr Yusuf Kuno Adan iyo Mr Said Adan Abdi, ay weli baxsad yihiin, kuwaasoo la sheegay inay Ms Romano ka iibiyeen kuwa haaten haystey, sida uu qorayo The Nation.
Previous articleQM oo ka hadashay cidda qabanqaabisay SHIR-KHADEED looga hadlay daadadka Qardho (Arag qoraallada)
Next articleGuddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo sheegay inay jiraan dad ”macaash” ka raadiya fatahaadda (Dad biyaha soo faruuraya oo uu sheegay!)